River Lodge 1 - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguTherese
Lo 3 bedrooms ungatshaywayo ukwizitrato ezithuleyo zase Hay. Kumgama nje omfutshane we-170 yeemitha zokuhamba ukuya elunxwemeni loMlambo i-Murrumbidgee, yeyona ndawo ifanelekileyo yokumisa ngokukhawuleza okanye ukuhlala ixesha elide. Ingaphaya kwendlela ukusuka eHay Park kunye nee-ovals zemidlalo, ilungele usapho okanye uhambo oluzolileyo. Iindwendwe zinokufikelela ngokupheleleyo kuyo yonke indlu, iyadi evaliweyo kunye ne-carport. I-driveway ivumela indawo eyaneleyo yokuba iimoto ezi-2 zokupaka phantsi kwekhava. Hay ininzi into oyibonayo nezokwenza, lendlu mayibe yintando yakho yokuqala.
Igumbi lokulala eliphambili linebhedi entsha kaKumkanikazi enetafile esecaleni kwebhedi. Amanye amagumbi okulala amabini aneebhedi ezi-2 zomntu omnye kwigumbi elinye kunye nebhedi enye kwigumbi lesithathu, kunye neetafile ezisecaleni kwebhedi. Onke amagumbi okulala akhelwe kwiiwodrophu ukuze kube lula kuwe. I-portacot iyafumaneka ukuba iyafuneka. Zonke iibhedi zineengubo zombane.
Kukho intambo yokunxiba, i-ayina kunye nebhodi yoku-ayina ukuze ube lula.
I-BBQ nayo iyafumaneka ukuze uyisebenzise. Nceda ushiye i-BBQ njengoko uyifumene, ukuba ishiywe ingacocekanga intlawulo eyongezelelweyo ye-$ 30 yokucoca iya kuhlawuliswa.
4.69 · Izimvo eziyi-91
Hay inezinto ezininzi zokwenza, kunye neemyuziyam ezintlanu, ichibi lokuqubha le-Olimpiki SIMAHLA, i-riverbend enkulu kunye ne-swim / ski beach kunye nentaphane yamabala entlanzi. Hay inoluhlu lweevenkile, iivenkile ezinkulu ezimbini kunye nesitishi senkonzo yeeyure ezingama-24. Kukho iindlela ezintle zokuhamba ezijikeleze uHay nazo. Iziko leNgcaciso yeeNdwendwe lide libonelele ngokuqeshwa kwebhayisekile SIMAHLA!
Umbuki zindwendwe ngu- Therese
Emva kokuba ubhaliso luqinisekisiwe indawo yokuthathwa kwesitshixo iya kucetyiswa. Ndihlala ndilapha etown ukuba kukho imiba.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-19318